Poolisiin magaalaa Buraayyuu haadha warraa B/J Asaamminaw Tsiggee to'annoo jala oolche - BBC News Afaan Oromoo
Haati warraa qondaala nageenyaa ajjeechaafi fonqolcha mootummaan himatamani, dhimma fonqolcha mootummaan walqabateen poolisii magaalaa Buraayyuun to'annoo jala oolan.
Itti-gaafatamaan Bulchinsaafi Nageenya bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Solomoom Taaddasa BBC'tti akka himanitti, ragaa ajjeechaa raawwaten walqabate guyyaa kaleessaa to'annoo jala oolan.
''Ragaan isaan dhoksan baay'eetu jira waan jedhamuf, kana qulqulleessuuf jecha to'atamniiru,'' jedhan. Yeroo ammaas haati warraa qondaala waraana kanaa Aadde Dastaa Asaffaa poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu akka jiran himaniiru.
Isaan alattis, meeshaan waraanaafi miseensi humna addaa naannoo Amaaraa tokko to'atamu qondaalli kuni himu.
Gaazexeessituu galgala ajjeechaan raawwate B/J Asaamminaw 'dubbiste'
''Gochaan kuni fonqolcha mootummaa irratti karoorfate waan ta'ef, meeshaa waraanaa achi qabame hin jira.
''Konkolaataawwan kanaaf fayyadamaa turan akkasumas humni addaa naannoo Amaaraa [tokko] kan B/Janaraal Asaamminaw mataasaa bobbaase asitti qabneerra.''
Miseensi humna addaa biraa yoo jiraate hordofamaa jira jedhaniiru.
Guyyaa har'aa intalli isaanii Maahileet Asaamminaw jedhamtu hamreen ishee guyyaa kaleessaa poolisiin mana isaanii magaalaa Buraayyuu, naannoo Ashawaa Meedaati qabu isaanii himtee turte.
B/J Asaamminaw Tsiggee ajjeechaa Waxabajjii bultii 15, 2011 magaalaa Baahridaaritti ajjeechaafi fonqolcha mootummaa taasisaniiru jedhani shakkamun osoo baqataa jirani poolisii naannichaan ajjeefamani turan.
Dabalataan intalli isaanii akka jettetti, torban darbe maatiin owwaalcha qondaala waraanaa kanaaf Laalibalaa yeroo turan, akkoon [haadha harmee ishee] ishee bakka ragaan jirutti manni isaanii poolisiin qoratamu himti.
Kanaanis, konkolaataa, laaptoppii akkasumas ragaawwan garaa garaa akka fudhataman ibsiti.
Qorannoo poolisiin taasise kan mirkaneessan Obbo Solomoon, ''Wanti ragaadhaaf gargaaru hunda, karaa seeraatin akka to'atamu godhameera,'' jedhaniiru.
Birgaader Janaraal Asaamminaw Tsiggeen magaalaa Baahirdaaritti mootummaan fonqolchi mootummaa taasifame isa jedhe akka hoogganan irra deddebbiin himameera.
Hoggantoonni olaanoo naannichaa balaa gaafasi irraa lubbuun hafanis qondaalli waraanaa ajjeefaman kun gaafa ajjeechaan raawwate akka hogganaa turan ragaa kennaniiru.
Ergasii sagaleen qondaaltichi gara miidiyaa naannichaa bilbilan jedhame gadhiifame irratti ''tarkaanfii fudhanneerra'' yeroo jedhan dhagahama.
Ajjeechaan erga Sambata galgala raawwate booda qondaalli hidhaadhaa bahani qondaala naannichaa ta'un muudaman naannoo magaalaa Baahirdaar ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.
Itoophiyaa daandii qaxxaamuraa irratti: Ajjeechaan tibbanaa rifoormii gufachiisaa?